Golaha Wasiirada DFKM oo shir ku yeeshay magaalada Muqdisho
Muqdisho:-Waxaa maanta shir iskugu yimid Golaha wasiirada DFKM iyagoo warbixino kale duwan ka dhagay stay Ra.iisul wasaaraha DFKM Prof. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo safaro kale duwan ku soo kala bixyey wadamo kale ah Maraykanka , Canada , Kenya ,Danmarka iyo dalka Itoobiya, kulanka marka uu dhamaaday ayaa waxaa ay ka soo baxday warsaxaafadeed ka hoos ku qoran.
Warsaxaafeed—-:-Shir ay maanta yeesheen Golaha Wasiirada oo uu shir-guddoominayey Ra.iisul Wasaaraha DFKM Prof. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin warbixin safarkii Ra’iisul Wasaaraha, Qaraxii 4ta October, Qorshaha Qaranka ee Xasilinta Nabadgelyada (NSSP) iyo arrimaha badda.
Wasiirka Garsoorka iyo Arrimaha Diinta ayaa sheegay inay wadaan dadaalo ay kula xiriirayaan eheladii iyo qaraabadii dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay, si warbixin dhameystiran ay ugu soo gudbiyaan golaha wasiirada, sheegayna in Dowladda Turkiga ayaa qaaday 36 ka mid ah dhaawacii. Wasiirku waxuu sheegay inay arrimahooda u marayaan heer wanaagsan una mahadceliyey shacabka soomaaliyeed oo si wanaagsan ula shaqeeyey.
Golaha Wasiiradu waxey kaloo go’aamiyeen in 8dii wasaaradood ay dib u howlgalaan loona saaray guddi ka soo talo bixiya 3 maalmood gudahood, iyagoo sheegay inaysan Al-Shabaab marnaba laga aqbaleynin inay hakad geliyaan u adeegidda shacabka Soomaaliyeed.